“Lama yaabi doono natiijooyinka Barcelona iyo Real Madrid” – Guardiola – Gool FM
“Lama yaabi doono natiijooyinka Barcelona iyo Real Madrid” – Guardiola
Dajiye October 1, 2021
(Manchester) 01 Okt 2021. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay guuldarooyinkii lama filaanka ahaa ee Barcelona iyo Real Madrid ka soo gaaray Champions League intii lagu jiray kulammadii labaad ee heerka group -yada.
Real Madrid ayaa ka yaabisay jamaahiirteeda kadib markii ay guuldarro 1-2 kala kulantay kooxda Sherif, iyada oo ku sugan garoonkeeda Santiago Bernabeu, wuxuuna kulankan yimid kaliya 24 saacadood kahor inta ayna Barcelona guuldarro 3-0 ah kala soo laabanin garoonka Estadio da Luz oo ay ku booqdeen kooxda Benfica.
Pep Guardiola ayaa carabka ku adkeeyay inuusan la yaabin guul -darrada Real Madrid iyo Barcelona, ​​isagoo xusay in Champions League uu yahay mid aad u adag, ayna caadi tahay in la helo koox ka adkaata kooxda kale.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola, isaga oo yiri:
“Kama yaabin natiijooyinka Champions League, waxaan ciyaarayay tartankan muddo 12 sano ah, waxaana aqaanaa in igu filan sida heerka tartanku u kici karo.”
“Ciyaar walba waxay noqon kartaa mid khatar ah, xitaa kooxaha waaweyn. Waagii hore, markii aan ogaaday sida ay u adkeyd inaan ku guuleysto ciyaarta Champions League, dadku ima dhageysan.”
“Taasi waa sababta, marka aad u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda, waa inaad u dabaaldegtaa. Markaad badiso ciyaar heer guruub ah, waa inaad u dabaaldegtaa. Marka aad u gudubto Wareegga 16 -ka, waa inaad u dabbaaldegtaa. Waa inaad u dabaaldegtaa oo aad na siisaa aqoonsiga tartankan u qalmo.”
Tababare Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka adag ee Atlético Madrid
Horudhac: Manchester United vs Everton... (Red Devils oo qarka u saaran inay diiwaan geliso rikoor madow kulanka maanta)